गोर्खा डिपार्टमेण्टका सञ्चालक बलराम आचार्यको अफवाह : हल्ला कि वास्तविकता ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १५, २०७७ समय: १६:४०:५७
इटहरी । पूर्वका सफल ब्यबसायी तथा गोरखा डिर्पाटमेण्ट स्टोरका सञ्चालक बलराम आचार्यकाे बिषयमा केहि दिन यता बजारमा बिभिन्न अफवाह फैलिएकाे छ । एक साताअघि आचार्यकाे व्यक्तिगत बिषयमा बजारमा बिभिन्न अफवाह फैलिएकाे थियाे । भित्रभित्रै आचार्यकाे त्याे अफवाह भुसमा सल्किएको आगोझै बनेको छ ।
यस्ताे अवस्था सिर्जना भए पश्चात पूर्वेली न्यूजसंगकाे कुराकानीमा उनले बजारमा फैलिएकाे बिभिन्न अफवाहरूमा सत्यता नरहेकाे बताए । आफु तथा अफ्नाे संस्थाकाे मनाेवल गिराउन व्यवसायलाइ लक्षित गरेर अनावश्यक अफवाह फैलाएकाे समेत उनले बताए । उनले भने “यस अघि पनि यस्ता खालका बिभिन्न अफवा फैलाइएका थिए त्यतिबेला खासै त्यति ध्यान दिइन, बारम्बार त्यस्ता प्रकारका अफवाह बजारमा फैलिएकाेमा यसप्रति आफु गम्भिर रहेकाे समेत बताए।” बिभिन्न समयमा फैलिने यस्ता अफवा प्रति आफु अचम्मित बनेकाे र अफह फैलाऊनेको खोजी कार्य तिब्रताका साथ भईरहेको बताए। उनले थपे ‘यस्ता अफवाले मलाइ एक प्रतिशत पनि प्रभाव पर्दैन निरन्तर आफ्नाे काम कर्तव्यप्रती इमान्दारिताकासाथ लागीराखेकाे छु ।’
किन चल्यो हल्ला ?
भनिन्छ, यो देश हल्लै हल्लाको देश हो । इटहरीमा पनि त्यहि लागु भएको देखिन्छ । ४ महिना लामो लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योग ब्यबसाय धराशायी बनेको अबस्था छ । केही गिरोह नै लागेर आचार्यको मनोबल घटाउने खेलमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।
आचार्यलाई केही बर्षअघि पनि यस्तै हल्ला चलाएर आफुलाई मानसिक तनाव दिएको सम्झिन्छन । फेरी त्यहि या अर्को गिरोह सक्रिय भएको र आफनो बदनाम गर्दै मनोबल घटाउने खेलमा लागेको उनी बताँउछन । इटहरी, धरान, बिराटचौक, पथरी र दमकमा डिर्पाटमेण्टको शाखा खेलेका र बिभिन्न ब्यबसायमा संलग्न आचार्य चर्चित ब्यबसायी हुन । उनले पछिल्लो समय होटल र कृषि क्षेत्रमा समेत लगानी गरेका छन ।
यस्ताे छ काेराेना पश्चातकाे याेजना
सरकारले लकडाउन अन्य गरे सगै नयाँ याेजनाका साथ व्यवसायमा फर्किएकाे उनी बताउँछन् । सरकारकाे निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाकाे सबै उपायहरू अपनाएर सुरक्षित तरिकाले व्यवसायहरू संचालन गरी्रहेकाे जानकारी दिए । साउन १५ गतेबाट इटहरीमा रहेकाे गाेरखा हाेटल संचालनमा ल्याएकाे समेत बताए । हाेटलमा नेपाल सरकारले ताेकेका सबै सुरक्षा मापदण्डहरूकाे पालना भएकाे साथै हाेटललाइ दैनिक निर्मलीकरण (डिसइन्फेक्सन) गरि संचालन गरिने बताए ।
त्यसैगरी गोरखा डिर्पाटमेण्ट स्टोरकामा रहेका सबै गाेरखा किचेनहरू समेत संचालनमा आएका छन् । डिर्पाटमेण्ट स्टाेरमा प्रवेश गर्दा ज्वराे मापन गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, मास्क, सेनिटाइजरकाे प्रयाेगलाइ अनिर्वाय गरिएकाे छ । माक्स नलगाइ प्रवेश निषेध नै गरिएकाे छ ।
लकडाउनकाे समयमा कर्मचारीहरूकाे व्यवस्थापन पनि सहज रूपमा गरेकाे उनले बताए । आफ्ना कर्मचारीले न्युनतम आवश्यकता परिपूर्ती तथा हात मुख जाेहाे गर्ने समस्या सिर्जना नभएकाे उनकाे भनाइ छ । डिर्पाटमेण्टका हजाराै कर्मचारीले आफ्रनाे सिफ्ट अनुसार काम गरिरहेका छन् । साथै लकडाउन र काेराेना संक्रमणले अहिले काममा फर्किन नसकेका कर्मचारीकाे हकमा जुन सुकै बेला आए पनि काम गर्ने सक्ने व्यवस्था मिलाएकाे र राेजगारी गुमाउने अवस्था नरहेकाे आचार्य बताउछन् ।